QEERROO: SHIRA DIINAAF HIN JILBEEFFANNU !!!!!!!!! - Ayyaantuu News
QEERROO: SHIRA DIINAAF HIN JILBEEFFANNU !!!!!!!!! Qeerroo | Fulbaana 18, 2012
Qeerroon Oromoo Biyya keessatti Injifannoon galmeesisaa jiru, fira gammaachiisuu qofaa osoo hin taane, hegaree diinaaf akeekkachiisa ol aanaa dhaamaafii jira. Wayyaaneen har’a gaaffiin Ummatoota isa yaaddeessuu irraa Bulchiinsa siyaasaa gama tokkotti sassaabbachaa kan jiru fakkaata. Wayyaaneen qormaata keessa isaa fi qabsoo Ummatootaa isa mudachaa jiru irraa , Biyyatti humna waraanaan Bulchuuf , labsa dabarsuuf arraba irra kan isa ga’e fakkaata .
Wayyaanee Ihaadeeg siyaasa isaa akka gaariitti fixate jira. Sababaa gara garaan Ummata sossobuun dhumateera. Toftaan umurii dheeraffannaa isaas akkasuma waan xumurame fakkaata. Wayyaaneen har’a umurii dheerechuu fi dhiisuun isaa harka ummatoota Qabsoo gaggeessanii keessa jira. Kana jechun, Ummatoonni jabaatanii , Irree isaanii wayyaanee irratti kaafnaan , wayyaaneen fincila Ummatootaa qofaan harka kennun dirqama isaatii. Yoo Ummatoonni laafatanis, umurii dheerachuun waan hin hafneedha jechuudha.
Maarree Qeerroo fi Ummata Oromoo maaltu isa eeggataan ? gaaffii jabduu taati jechuudha.
MURANNOO NU BARBAACHISU:-
Sochiin hawaasa keenyaa akka baayyina keenyaa, cichoominni keenya akka seenaa keenyaa ta’uu baatuus, tarkaanfiileen waggoota 3n kana keessa fudhatamaa jiran , akeeka hegaree qabsoo keenya , firaafis diinaafis kan akeekudha. Sochiileen gama kanaan jiran hundi gilgaalamanii , bu’aan argamsiisan ilaalamee , waan eegalametti fufun filmaata biraa hin qabaatu.
Diinni keenya waggoota 130 ol nu ajjeesanii umurii nu irrattii lakkaa’aa jiraatan. Nuutii ammo waggoota amma kana du’aafii jirra. Garaa bal’chuun keenya du’a keenya hin dhaabne. Callisuun keenya hiraarrii fi goodaansa Ummata keenyaa hin dhaabne. Rakkoon rakkoo caalu yeroo nu irratti dhalchaa deemee, har’a jumulaan ajjeefamuu , hidhamuu , Biyyaa godaanu fi qabeenyaa keenya irraa buqqifamu irra geenye jirra.
Diinni shiraa fi hammeenya nu irratti hojjatu kan caalaatti akka jabeessu taasisu ammo callisuu keenyaa fi diinni callisuu keenya akka sodaatti ilaaluudha. Kun seenaa keenya keessaa geeddaramuu qaba.
Har’a qabeenyaa keenya kabachiisuuf , dachee keenya irratti qeerroon falmachuun diina rifaasisee, fira kan gammachisaa jirudha. Kun jaallannee kan itti seenne odoo hin taane, of jiraachisuu fi jiraachuuf qofaa kan itti seenneedha. Ega itti seenanii ammo , diinni hanga nama hubatuttii itti fufun murteessaadha. Yoo ta’uu baatee miidhaa kana irra caalaa ofitti waamaa jirra.
Kanaaf , Fincila wal irraa hin cinnee fi gaaffii mirgaa daran jabeessuun, diina irrattii tarkaafii isa dammaqisu gaggeessuun murteessdha. Bara gi’iizii dhumate kana tarkaanfiileen jiran , diina qabeenyaa keenya saamee cinaacha dalga yaafate itti hin dhaga’amne. Kan baranaa garuu kan miillaa kaasee hanga sammuuttii itti dhaga’amuu gaggeeffachuun barbaachisaadha. Diinni yeroo nu ajjeesu jalqaba, nu uruursee odoo hin taane, akka gadda tokkollee nuuf hin qabneettidha. Bakka jirrutti tarkaanfii mataa qabsiisu ilaallachuun barbaachisaadha. Kun hundi kan isaan ofitti fidan malee , oromoon jibba qabaateen kan raawwatu miti. Waan marafuu qeerroon oromoo waan hundatti jabeessuun kabajaa isaaf tola.
TOFTAA WAYYAANEE BARANAA :-
Wayyaaneen sochii qeerroo dhaabuuf sochii bal’aa gaggeessuun waan hin oolle. Keessattuu ilmaan isaanii Oromiyaa keessatti guddatan sochii qeerroo keessa seensisuun sochii qeerroo hundeedhaa dhabamsiisuu kan jedhu ta’uu , keessa beektoonni ni ibsan. Keessattu sochii gama kooleejaa fi yunivarsittin gaggeeffamu dhaabuuf qophii bal’aa taasisuutu himama. Keessattuu ilmaan oromoo saboota biro waliin walitti buusanii kasaaraa irraan ga’uu kan jedhu waan jiruuf , Ilmaan Oromoo waan deemaniif akka gaariitti hubachu isaan barbaachisa.
Tarkaanfiin gama investimantiin jiru, keessa wayyaanee qooduuf qooda ol aanaa gumaachuu barannee, sochii gama kanaan jiru jabeessuu fi ijoollee wayyaanee, keessattu ilmaan isaanii fi saboota biro waan hojiilee akka maayikiroo xixiqqaa keessatti hirmaachisuun, kana malees carraa hojii adda addaa kennuufiin ijoollee oromoo akka tu’atan kanneen taasisan adabanii sochii ofii ganda keessaa babal’ifachuun hedduu barbaachisaa ta’uu beekuun dansaadha.
Gama biroon dargaggoota gama qabsoon sochii itti jiran dhaabuudhaaf wanni yaadamee jiru, qalbii dargaggootaa , gama ispoortii, tiyaatiraa, muuziqaa, Diraamaa, Filmii gara garaa baayyinaan hojjatanii Naannoolee keessa gadhiisuu , kanas taasisuuf , INDUSTIRII FIILMII FI MUUZIQAA wayyaaneen guutummaatti tu’attee, saboonni sirbootaa fi Diraamaa ykn fiilmii akka Qooqa isaaniin hin hojjannee dhorkuu fi ukkaamsu , kan isaan barbaadan ammo facaasuu irratti qophii bal’aa taasisuutu dabbatama.
Kanaaf Ummati fi Qeerroon Oromoo kana irratti jabiinaan hojjachuu barbaachisa. Sochii isaanii kana dhaabuuf mormii wal irraa hin cinnee gaggeessuun barbaachisaadha. Wayyaaneen sabboonummaa sabootaa sodaachu irraa , sabboonummaa sabootaa ajjeesuuf hojii bal’aatti jiraachuun waan ifatti mul’ataa jirudha. Kanaaf waan aadaa fi eenyummaa keenya balleessuuf shirri gara garaa yennaa hojjatamu ucallisuuf of dhabamsiisuu malee waan biraa jechuun hin danda’amu.
KEESSA OFII TIKIFACHUUN:-
Qabsoo humni kamuu gaggeeffatu keessatti keessa isaa tikifachuun heddu murteessaadha. Wayyaaneef mataa dhukkibbii kan ta’ee qeerroon qaamni jabiina isaa kanadha. Kana caalaatti tikifachuu fi bal’ifachuun barbaachiisaadha. Oromoon wal tikisii fi of tikisuu barachuu qaba. Waliif dhaabbachuu , waliif dhimmuu baratee, waliif falmuu aadaa isaa keessa jiru, hojiin argisiisuu qaba.
Daboo wal waammachuun midhaan dhahachuuf qofaa miti. Bara rakkos daboo wal waammatan . waliif birmatan . kun har’a nu barbaachisa. Nama keenya tokko diinni harkaa fi miilla hidhee wayita nu keessaa fuudhee deemu callisuun dhugumatti akka aadaatti fafa . kana baranatti geeddarachuu fi diina rifaasisuu qabna. Dhalli oromoo hidhaatti guuramuun dhaabbachuu qaba. Hojii irraa ari’amuun dhaabbachuu qaba.
Gamataa dhabuun keenya hedduu nu miidhee jira. Waan waggoota sadii asitti argaa jirru caalaatti jabaachuu qaba. Dachee keenya irratti salphachuun dhaabachuu qaba. Diinni callisuu keenyaatti caalaatti garaa akka nutti jabaatu yoo taasifne malee, akka of qusatu hin taasifnu. Wal irratti du’uun , waan hojjannu irratti naamus qabaachuun , waan yaannee hundumaa milkeeffachuuf keessa keenya tikifannee , wayyaanee keessi ishee daddaaqamee isaanuu keessa wal haphisaanii jiran kana caalaatti sochoosnee bakka abuqqisuun murannoo keenya baranaa ta’uu qaba.
Biyya keenya irratti walabummaa fi Bilisummaa kan argannu, Qabsoo gaggeessinuu fii wareegama kafallu qofaadhan ta’un haqa. Obbolaan keenya kaleessa mirgaa fi Abbaa Biyyummaa umata isaaniif aarsaan isaan baasan eenyun olitti kan yaadatamaa jiraatudha. Biyya keenya , mana keenya keessatti namaa gadi taanee jiraachaa jirra. Gootummaan Ummata keenyaa haalamee, ganda tokko keessaa kanneen dhufanii Ummati miliyoona 40 salphatee jiraataa jira.
Addunyaan kun kan humna qabuuti. Haqi bakka dhabee, of tuulummaa fi hattummaan bakka argatee bakka jirutti haqa ofii karaa nagaa eeggachuun gawwummaa addunyaa irra hin jirredha. Kanaaf , qabsoon keenya kan amma jiru irra jabaachuu qaba. Diina irratti garaa jabaanne malee gonkuma nu dhaga’uu hin danda’an. Isaan jiraachuuf nu ajjeesutti murteeffatanii jiru. Nuuti ammo akka isan barbaadanitti du’uu odoo hin taane, waan barbaannee fi akka barbaannutti duunee, ummata keenya rakkoo jalaa baasuu qabna.
Diina mana keessatti , dadhabbii malee nu bira yaa’uu callisnee ilaalun haa raawwatu. Oromiyaan Abbaa isheen buluu qabdii. Dacheen oromiyaa abbaa isheef tajaajilu qabdi . qabsoo gama hundaa , finiinsuun waadaa keenya baranaati. Wayyaaneen shira feetu hojjattuu fii hammeenya barbaaddu nu irratti hojjattu qabsoo keenyaa duubatti nu hin debstu. Bilisumma akeenyaaf tarkaanfii kabajaa nu goonfachiisu, Bilisummaatti nu baasu fudhachuun diina OROMIYAA irraa kaasuun kaayyoo keenyadha. Diinni guyyu tokkof Oromiyaa irratti boqonnaa hin argatu. OROMIYAAN NUUF MANA HIDHAA TAATE, DIINAAF BAKKA JIREENYAA HIN TAATU. KAN BADU BADEE BIYYA KEENYA NI DHUNFANNA.
WAYYAANEEN WAAN AMMA OROMOO WAAN HUNDAA KEESSAA MOGGEESSU GAGGEESSAA JIRTUUF QORICHI ISAA GARA JABIINA KEENYA QOFAADHA. 5 comments - What do you think? Posted by admin - 18/09/2012 at 8:31 am Categories:
5 Responses to “QEERROO: SHIRA DIINAAF HIN JILBEEFFANNU !!!!!!!!!”
Tola Gamachis says:	18/09/2012 at 9:25 am	Malaaa fi fala gaariidha! Jabaadhaa hinjabaannaa Ummaata Oromoo, hanga yoomiitti garbummaan nurra teessi!Qeerroo, sin duuba jirra jabaaadhaa sinillee!!
Gadisa says:	18/09/2012 at 10:38 am	tarkaanfiu bareedadha, qeerroon haala bareedaa irra jiran. Kanaf nuti ilmaan oromoo hundinuu harka wal qabannee tokkummaan diina ofirraa fonqolchuu qabna.
Sabboonaa says:	18/09/2012 at 11:00 am	Ka’i ilmaan dargaggeessa Oromoo haa f almannu mirga keenyaaf!!
dhuga says:	18/09/2012 at 11:21 am	Qeerroo
Murteef kutannoo isiin fudhataan baayyee kan nama gammachisuu,nama jabeesuuf kan nama boonsudhaudha. Yeroon enyumma fi abba biyya ta’uu keesaan ergamtuufi abba hirre biyyittiti tokkumman agarsiitan amma. Jabaadha waan barbachiseen ni siin bukkee dhabbana.
Tokkumman diina keenya ni moona!!!
Abjuu says:	18/09/2012 at 3:29 pm	Qeerroo jabaadha wal tosiifnaa bilosummaan kenyaa fagoo miti . Egaa yaa oromo qeerroo teela deemu qofa otoo hintaane sochii qerroo kessa qooda qabaadha injifanoon kan ummata balla oroti